Indy Bhizinesi Kugadzira: Nguva yakatarwa Mangwana! | Martech Zone
Pandakanga ndiri zasi kuHouston, mumwe wevatauri akacherekedza mashandisiro achaita kambani kambani mari yakawanda pane yavo yekutandarira kupfuura yavachaita pavari paIndaneti kuvapo. Hapana anobvunza mugadziri wemasofa kuti chii chinodzoserwa pakuisa mari chiri pasofa reganda rakanaka kune yekuchengetedza - asi munhu wese anotema uye chisisi kure nemutengo we Website itsva.
Makambani akawandisa anoshaya hanya nezano racho zvachose - akanyanyobatikana nemazano avo azvino kuti vanetseke nezve online kushambadzira zano. Yako webhusaiti ichawana vashanyi vazhinji kupfuura yako yekutandarira ine dhizaini yakakura uye zano shure kwayo! Inguva yekugadzirisa, asi zvakaoma kururamisa iyo mari ... zvinenge zvisingaite mune ino hupfumi. Kusvikira zvino…
Kana iwe uri bhizinesi pakati peIndiana, heino mukana! Kune imwe kambani yemuno, iyo Indy Bhizinesi Makeover Makwikwi anozove anokodzera-kuzorodza. Femu inokunda ichagamuchira masevhisi ekushambadzira, sevha nyowani, Webhusaiti uye fenicha yehofisi pakati pemimwe mibairo. Uine zvinopfuura $ 80,000 yezvinhu zvakapihwa uye masevhisi kubva kumabhizimusi emuno, iyo Indy Bhizinesi Makeover Makwikwi anoti kune varidzi vebhizimusi vanoshanda nesimba, "nakidzwa nekugadzira kwedu, iwe wakachiwana."
Yekupedzisira nguva yekushandisa mangwana - Chikunguru 29, 2009! Tarisa uone iro runyorwa rwemibairo - ivo vanosanganisira makumi mana eblog blog neCompendium Blogware, futi! Ndiri kuzoona kana ndichigona kutaura nechikwata kuti chindibvumire kukanda madhora zviuru zvitatu zvemazana matatu mukati mechindori - kubatsira nemaitiro ehukama, kusangana kwenhau, kutarisisa kutendeuka, nezvimwe.
Basa rakakura nevanhu pa Diki Bhokisi uye Pivot Kushambadzira yekuisa pamakwikwi makuru aya.
Tags: otomatikidhidhi databhiribhodhi hoaxGuy Kawasakiivarsivars billboard hoaxivars chowdermschmoldtvhidhiyo kushambadzira
Kuisa kukosha pasocial media ne Tourism